स्वास्थ्य – Page2– SidhaRekha
२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार ११:३६२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार ११:३६२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार ११:३६ by Sidharekha Online
सबैलाई थाहा छ, आमाको दूूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६ महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउने ? बेलायतमा जबसम्म आमा र बच्चा चाहन्छन्, त्यतिबेलासम्म स्तनपान गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ। स्तनपानबाट बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र उनीहरु बिरामी पर्दैनन्। बेलायतका नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले पनि स्तनपानका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन। ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउने सल्लाह दिइन्छ। त्यसपछि दूधका साथै अन्य खाद्यपदार्थ खुवाउन सकिन्छ। विशेषज्ञका अनुसार आमाको दूधले बच्चामा कुनै पनि संक्रमण हुन दिँदैंन। जबसम्म बच्चाले आमाको दूध खान्छन्, उनीहरुलाई मोटोपनाको समस्या पनि हुँदैंन। स्तनपान गराउन आमाका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। स्तन र अण्डाशय क्यान्सरको खतरा हुँदैंन। एनएचएसले स्तनपान गराउने कुनै सीमा नतोकेपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुुई वर्ष
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ११:२०२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ११:२०२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ११:२० by Sidharekha Online
हिन्दू धर्ममा कैयौं प्रकारका धार्मिक तौरतरिका छन्, जसको हाम्रो जीवनमा गहिरो महत्व छ। कतिपय यस्ता कार्यका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छन् । प्राचीन परम्पराहरु हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन बनाइएको पाइन्छ । यस्तै एक परम्परा हो शंख बजाउनु । हिन्दू धर्ममा शंखको महत्वपूर्ण स्थान छ। शंख राख्दा नकारात्मक उर्जा आउँदैंन र नराम्रो शक्ति टाढा भाग्छ । आयुर्वेदमा शंख निकै लाभदायी मानिन्छ । शंख बजाउनाले मूत्राशय, पेटको तल्लो भाग, छाति र गर्धनको मांसपेशीको स्वतः अभ्यास हुन्छ । जानौं शंख बजाउनाका फाइदा : फोक्सोका लागि फाइदाजनक शंख बजाउँदा फोक्सोको राम्रो अभ्यास हुन्छ । यदि श्वासका रोगी नियमित रुपमा शंख बजाउँछन् भने यसको पूर्णतः निर्मूृल हुन्छ । शंख बजाउनाले अनुहार, श्वासतन्त्र, श्रवण तन्त्र तथा फोक्सोको अभ्यास हुन्छ । स्मरणशक्ति पनि बढ्छ। छाला र हड्डीको हेरविचार शंख छालाका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार १०:०६२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार १०:०६२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार १०:०६ by Sidharekha Online
निपा भाइरस पशुबाट मानिसमा सर्ने नयाँ रोगको रुपमा विकसित हुँदै गरेको एक खतरनाक भाइरस संक्रमण हो । यसले मानिस र पशु दुबैलाई संक्रमण गर्न सक्दछ । यस भाइरस प्राकृतिक रुपमा टेरोपस भन्ने प्रजातिको चमेरोमा रहने गर्दछ । निपा भाइरस पारामिक्जोभाइरिडि परिवारभित्र पर्ने हेप्नीभाइरस भन्ने समूहको एक सदस्य हो जसमा यस बाहेक हेन्ड्रा भाइरस पनि पर्दछ । सन् १९९४ मा घोडा र मानिस हरुमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगको कारक तत्वको रुपमा यस भाइरस पहिलोपटक पत्ता लागेको थियो । त्यसैगरि पहिलो पटक सन १९९८ मा मलेसियामा यो भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिएको थियो। त्यस बखत सुंगुरको माध्यमबाट यो भाइरस मानिसमा सरेको थियो। त्यसपश्चात् सिङ्गापुरमा र सन् २००४ मा बङ्लादेश हुँदै भारतसम्म देखापरेको थियो । हालसालै भारतको केरलामा निपाह भाइरसको संक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। कसरी सर्दछ निपा भाइरस
२०७५ बैशाख २, आईतवार १०:०८२०७५ बैशाख २, आईतवार १०:०८२०७५ बैशाख २, आईतवार १०:०८ by Sidharekha Online
बैतडी । बैतडीका चारवटा स्वास्थ्य संस्थाहरु किशोर किशोरी मैत्री संस्थाका रुपमा स्थापित भएका छन् । जिल्लाका सिद्धेश्वर, भौनेली, शर्माली र कुवाकोट स्वास्थ्य चौकी किशोर किशोरी मैत्री संस्थाको रुपमा प्रमाणिकरण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । किशोर किशोरी मैत्री हुनका लागि चारवटै स्वास्थ्य संस्थाहरुले आवश्यक सबै सुचक र मापदण्ड पुरा गरेको स्वास्थ्य बिभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले प्रमाणिकरण गरेको हो । किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य संस्थाका ९ ओटा राष्ट्रिय मापदण्डहरु रहेका छन् । त्यस्तै ८७ ओटा सूचकहरु पूरा गरेको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । किशोरीकिशोरीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अलग्गै कोठाको व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा किशोरकिशोरीहरुको सहभागि
२०७४ चैत्र १९, सोमबार २०:२४२०७४ चैत्र १९, सोमबार २०:२४२०७४ चैत्र १९, सोमबार २०:२४ by Sidharekha Online
मन्त्री बिना मगरको पहलमा महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निशुल्क जाँच
हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरीमा सोमबार महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निशुल्क चेकजाँच गरिएको छ । क्यान्सरकै कारणबाट निधन भएकी प्रचण्ड पुत्री ज्ञानु दाहाल र आफ्ना दिवंगत पति एवं प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको सम्झनामा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सहयोगमा क्यान्सर रोगको निःशुल्क चेकजाँच शिबिर संचालन गर्नु भएको हो । क्रान्तिकारी महिला सञ्जाल बेलौरीको आयोजनामा सोमबार बेलौरीको श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ४ सय ५२ महिलाको चेकजाँच गरिएको छ । जस अन्तर्गत १ सय २ जनामा पाठेघरमा संक्रमण भएको, १२ जनामा पाठेघरको मुखमा मासु पलाएको, १७ जनामा आङ खस्ने समस्या देखिएको र ३ जनामा क्यान्सरको आशंका गरिएको छ भने १० जनामा क्यान्सर पूर्वको अवस्था द
२०७४ चैत्र १९, सोमबार १४:०१२०७४ चैत्र १९, सोमबार १४:०१२०७४ चैत्र १९, सोमबार १४:०१ by Sidharekha Online
यदि तपाईंमा खाना खाँदा धेरै पानी पिउने बानी छ भने तुरुन्तै बदल्नुहोस् किनकि त्यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा फाइदा गरिरहेको हुँदैन। पानी पिउनु कति फाइदाजनक छ भनेर त हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर, कतिबेला पिउने वा नपिउने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हाइड्रसन र पाचन प्रणालीलाई अति आवश्यक पदार्थ हो पानी। खाना खाएको बेला धेरै पानी पिउँदा यस्ता हानि देखिन सक्छन् : - यदि तपाईं खानासँग धेरै पानी पिउनुहुन्छ भने यसले पित्त र पेटमा अम्लको आवश्यक स्तरमा असर पार्न सक्छ। यसबाट तपाईंको खाना ठिक तरिकाले पचाउन नसकेर पेटमा अन्य विषाक्त तत्व जम्मा हुन थाल्छन्। - खाना खानभन्दा ३० मिनेट पहिला पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । खाना खानुभन्दा ३० मिनेट पहिले पानी पिउँदा त्यसले बीचबीचमा पानी पिउने बानी हट्दै जान्छ। खाना पचाउने रसले त्यसपछि आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सक्छ। - सात्विक आहार नै हाम्रो स्वास्थ्
२०७४ माघ १८, बिहीबार ०६:४१२०७४ माघ १८, बिहीबार ०६:४१२०७४ माघ १८, बिहीबार ०६:४१ by Sidharekha Online
रौलेश्वरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सिविर हुने
बैतडी । सुर्नया गाउँपालिकाको रौलेश्वरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सिविर हुने भएको छ । यही माघ २२ र २३ गते बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर–५ स्थित रौलेश्वर मावि रामकी बराइलमा निःशुल्क स्वास्थ्य सिविर हुन लागेको हो । रौलेश्वर पूर्व विद्यार्थी समाज, सुर्नया गाउँपालिका र शुक्रपथ फाउण्डेसन, काठमाडौको सहयोगमा रौलाकेदार निःशुल्क स्वास्थ्य सिविर हुन लागेको सिविर संयोजक रिजन मडैले जानकारी दिएका छन् । उक्त निःशुल्क सिविरमा जनरल फिजिसियन, नाक, कान, घाटी, बालरोग, हाडजार्नी, दन्तरोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग र समान्य ल्याव परिक्षण लगायतका सेवा उपलब्ध हुने संयोजक मडैले जानकारी दिएका छन् । उक्त सिविर सुर्नयावासीका लागि केही हदसम्म फलदायी हुने उनले बताए । ‘हाम्रो सुर्नया हाम्रो पहिचान, स्वास्थ्य र समृद्धि हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको निःशुल्क स्वास्थ्य सिविरमा सम्बन्धित बिषयका वि
२०७४ माघ ६, शनिबार ११:०४२०७४ माघ ६, शनिबार ११:०४२०७४ माघ ६, शनिबार ११:०४ by Sidharekha Online
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा ईसीजी र भिडियो एक्सरे सेवा संचालन
बैतडी । बैतडीको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ईसीजी र भिडियो एक्सरे सेवा संचालनमा आएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (स्वास्थ्य बिमा) ले पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ईसीजी र भिडियो एक्सरे मेशिन उपलव्ध गराएपछी ईसीजी र भिडियो एक्सरे सेवा संचालनमा आएका हुन् । यी सेवाहरु पाटनमै संचालनमा आएपछी बिरामीले बाहिर गएर उपचार गर्नुपर्ने समस्या हटेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. नविन्द्र ढकालले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बैतडीमा जिल्ला अस्पताल, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपचार सेवा दिने अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत ईसीजी, भिडियो एक्सरे, एक्स–रे सेवा राखिएको छ । बैतडीमा विसं २०७३ पुस ७ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमाले पाटन प्राथमिक स्
२०७४ पुष ३०, आईतवार २०:३२२०७४ पुष ३०, आईतवार २०:३२२०७४ पुष ३०, आईतवार २०:३२ by Sidharekha Online
हाम्रा दाँत किन पहेँला हुन्छन्, जानी राखौँ
दाँत हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यसले हाम्रो शारीरिक सौन्दर्यलाई झल्काएको हुन्छ । आफ्ना दाँत सेता र चम्किला होउन् भनेर कसले चाहन्न र ? विभिन्न ब्राण्डका टुथपेस्ट प्रयोग गर्नेदेखि डेन्चर व्हाइटनरको प्रयोग गर्नेदेखि दन्त चिकित्सकसँग परामर्शसम्म । हामी के के गर्न पछि पर्दैनौ दाँत सेता पार्न । कतिपय अवस्थामा सेता र चम्किला दाँतहरूका लागि बनेको भनेर विज्ञापन गरिएको टुथपेस्टले दिनमा दुई पटक ब्रस गर्दा गर्दै पनि दाँतको पहेँलोपन यथास्थितिमै रहिराख्यो भने खल्लो लग्नु स्वाभाविक हो । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रा दाँतहरूमा हुने सेतोपनको प्रमुख कारण सरसफाई नभई दाँतको बाहिरी पत्रमा रहेको इनामेलका कारण हुन्छ । कुनै अवस्थामा यो कम हुन थालेपछि दाँतको सेतोपन पनि घट्ने र पहेँलोपन बढ्ने हुन्छ । हुन त दाँतको पहेँलोपना अति सामान्य अवस्था हो । र दाँतहरूलाई सेतै राख्ने उपायहरू पनि छन् । हो, त्
२०७४ पुष २९, शनिबार ११:३७२०७४ पुष २९, शनिबार ११:३७२०७४ पुष २९, शनिबार ११:३७ by Sidharekha Online
डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोडे
काठमाडौं । सोमबारदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले शनिवार अनसन तोडेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराको टोलीसँग शुक्रबार बेलुका वार्तापछि पाँच बुँदे सम्झौता गर्दै केसीले आज अनशन तोड्ने सहमति गरेका थिए। डा केसीले शनिवार बिहान साढे १० बजे अनशन तोडेका हुन्। अनसन तोड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले सहमति कार्यान्वयन नभइन्जेल खबरदारी जारी नै रहने बताएका छन्। सरकारसँग शुक्रबार राति पाँचबुँदे सहमति गरेपछि उनी अनसन तोड्न सहमत भएका थिए। शुक्रबार राति ८ बजेदेखि सुरु भई करिब २ घन्टासम्म चलेको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा आयोग एक साताभित्रमा गठन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आइओएमका डीनमा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिने लगायत पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीमा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँगै स्वर्णिम वाग्ले, डा गोविन्द पोखरेल सहभागी थिए भने